Julio Llamazares: akwụkwọ o dere | Akwụkwọ akụkọ
Isi iyi foto Julio Llamazares: Akwụkwọ: Acescritores
Julio Llamazares Ọ bụ otu n'ime ndị edemede a ma ama na Spain, mana ọ bụghị naanị maka ọrụ ya dị ka onye edemede, kamakwa dị ka onye edemede ihe nkiri Spanish na onye na-ede uri. Akwụkwọ Julio Llamazares dị ọtụtụ kemgbe ọ malitere ọrụ ya na agụmagụ, ọkachasị n'ụdị uri, ịkọ akụkọ na akwụkwọ ndetu njem.
Onye edemede nke 'The yellow rain' ma ọ bụ 'Ọnwa anụ ọhịa wolf' nwere ọtụtụ akwụkwọ maka otuto ya. Ma nke ahụ bụ ihe anyị ga-egosi gị ọzọ.
1 Ọnye na-bụ Julio Llamazares
2 Akwụkwọ nke Julio Llamazares dere
2.3 Mmekọrịta pịa
2.5 Edemede ihe nkiri
Ọnye na-bụ Julio Llamazares
Isi mmalite: Huffpost
Nke mbụ, anyị chọrọ ka ị mara onye Julio Llamazares bụ. Aha n'uju Julio Alonso Llamazares, a mụrụ na Vegamián, a Enwere m ike ịpụọlarị na León. N'ebe ahụ, nna ya, Nemesio Alonso, rụrụ ọrụ dịka onye nkuzi tupu mmiri mmiri Porma bibie obodo ahụ.
N'ezie, Julio Llamazares ekwesịghị ịbụ a mụrụ na Vegamián, n'ihi na ezinụlọ ya bụ nke La Mata de Bérbula. Otú ọ dị, akara aka akwadebewo ebe ọzọ a ga-amụ ya.
Mgbe Vegamián nwụsịrị, ezinụlọ ahụ dum kwagara Olleros de Sabero na ebe ahụ bụ ebe o bi n'oge ọ bụ nwata, na-agbanye obodo a na Sabero.
N’agbanyeghi Ọmụmụ Julio Llamazares lekwasịrị anya na Iwu, ma ọ gụsịrị akwụkwọ na ọrụ a, nke bụ eziokwu bụ na n'ikpeazụ ọ hapụrụ ọrụ ọ na-arụ ma kpebie ịrara onwe ya nye akwụkwọ akụkọ, telivishọn na redio na Madrid. Obodo nke ị na-ebi ugbu a.
Mpụta mbụ ya dị ka onye edemede bụ na 1985, mgbe e bipụtara 'Luna de lobos'. A malitere ide ọrụ a na 1983 na afọ abụọ ka e mesịrị, ọ hụrụ ìhè na nkatọ dị mma (ọ ghaghị iburu n'uche na ọ bụ otu n'ime ọrụ ndị a ma ama nke onye edemede). Afọ atọ ka e mesịrị, na 1988, o bipụtara akwụkwọ nke abụọ, 'The Yellow Rain', nwere ihe ịga nke ọma nha anya.
Ọrụ abụọ a bụ ndị ikpeazụ maka ihe nrite akwụkwọ nke mba na ụdị akụkọ. Agbanyeghị, ọ bụghị naanị ha bụ ndị ikpeazụ ma ọ bụ ndị nwetagoro ihe nrite.
Dịka ọmụmaatụ, na 1978 ọ meriri Antonio González de Lama Award; na 1982 Jorge Guillén Prize na otu afọ ka e mesịrị ihe nrite Icarus. Na 2016 ọ bụ onye ikpeazụ maka Castilla y León Critics Award maka 'ụzọ dị iche iche nke ile mmiri'.
Maka ọrụ nta akụkọ ya ọ natala El Correo Español-El Pueblo Vasco Award Journalism (1982) ma ọ bụ International Critics Week Award na Cannes International Festival.
Akwụkwọ nke Julio Llamazares dere
Isi mmalite: otrolunes.com
Akwụkwọ mbụ Julio Llamazares bipụtara bụ na 1985. Akwụkwọ akụkọ. Agbanyeghị, tupu ụbọchị ahụ, o jiri akụkọ mee nzọụkwụ mbụ ya, El entierro de Genarín, na 1981.
Ndị gụrụ onye dere ya kwuru nke ahụ Ụzọ o si ede na-akpachi anya nke ukwuu, ọ na-eji okwu ndị siri ike na nke ziri ezi, na nke ejiri nkọwa zuru ezu na nlezianya mara nke ọma. Ya bụ, ha anaghị adị arọ, mana jiri okwu ndị ịchọrọ ịkọ ihe dị n'akụkụ ndị odide ahụ.
Otú ọ dị, Julio Llamazares n'onwe ya na-ekwu banyere onwe ya na ya nwere ọhụụ uri, ma ọ bụrụ na anyị eleba anya n'abụ ndị o dere, ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ, ha na-abaghị uru.
Ọ bụ ezie na ọ maara ka ọ ga-esi tinye uri ahụ n'ụzọ o si ede, karịsịa na nso ụwa, na-eṅomi mmadụ na okike. Ikekwe ọ bụ ya mere obi ji adị gị mma ide akwụkwọ njem (nke a bụ otu n'ime akwụkwọ ikpeazụ ị bipụtara).
Ma ọ bụ ya Julio Llamazares ebipụtala akwụkwọ nke ụdị dị iche iche, dị ka anyị ga-ahụ n'okpuru.
Nke a bụ ụdị mbụ ejiri mara Julio Llamazares na o meghị ya nke ọma ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ọtụtụ akwụkwọ ya enweela ihe ịga nke ọma n'ụzọ dị ịrịba ama mgbe ewepụtara ya.
Olili ozu Genarín (1981), obere akụkọ
Ọnwa anụ ọhịa wolf (1985), akwụkwọ akụkọ.
Mmiri ozuzo edo edo (1988), akwụkwọ akụkọ.
Ihe nkiri nkiri gbachiri nkịtị (1994), obere akụkọ.
N'etiti enweghị ebe (1995), akụkọ.
Akụkọ eziokwu atọ (1998), akụkọ.
Ndị njem nke Madrid (1998), akụkọ.
Eluigwe nke Madrid (2005), akwụkwọ akụkọ.
Ọtụtụ agụụ maka ihe ọ bụla (2011), akụkọ.
Anya mmiri nke San Lorenzo (2013), akwụkwọ akụkọ.
Ụzọ dị iche iche nke na-ele mmiri (2015), akwụkwọ akụkọ.
N'okwu a, onye edemede enweghị ihe ọ bụla dị na akụkọ, ebe ọ bụ na e nwere nanị akwụkwọ abụọ nke mejupụtara nchịkọta uri ndị o bipụtara.
Ịdị nwayọọ nke ehi (1979).
Ebe nchekwa nke snow (1982).
Mmekọrịta ndị nta akụkọ bụ akụkọ echiche ma ọ bụ akụkọ. Ọ bụ ezie na o yiri ka o dechaghị ihe, n’ezie, utu aha nke ọ bụla nwere ọtụtụ afọ. Dị ka ihe atụ, Babia gụnyere isiokwu nile o bipụtara n’afọ 1986 ruo 1991. N’ihe banyere Ọ dịghị onye na-ege ntị, ọ bụ ihe e chịkọtara n’afọ 1991 na 1995. N’ikpeazụ, n’etiti nkịta na anụ ọhịa wolf, anyị ga-enwe nchịkọta sitere na 1991 ruo 2007.
Ekwesịrị iburu n'uche na site na 1995 gaa n'ihu, akwụkwọ akụkọ, obere akụkọ na ụdị ọrụ ndị ọzọ pụtara na enwere m obere oge maka mmekorita.
Na Babia (1991).
Ọ dịghị onye na-ege ntị (1995).
N'etiti nkịta na anụ ọhịa wolf (2008).
Akwụkwọ njem bụ otu n'ime ihe kacha amasị onye edemede, karịsịa n'ihi na ọ jikọtara ịdị adị nke mmadụ na okike ma nye ya ngwá ọrụ iji mụtakwuo banyere ala anyị na-eje ije.
Ya mere, anyị nwere ike ịhụ nke ahụ Ọtụtụ akwụkwọ e si n’ahụmahụ ya dee, dị ka akụkọ ihe mere eme nke njegharị ma ọ bụ njem ọ rụrụ.
Ụdị a bụ ebe anyị nwere mbipụta akwụkwọ Julio Llamazares niile kacha ọhụrụ.
Osimiri nchefu (1990).
The Nkume Roses (2008).
Atlas nke echiche Spain (2015).
Njem nke Don Quixote (2016).
Roses nke ndịda (2018).
Mmiri Extremadara (2020).
Edemede ihe nkiri
Ọ bụrụ na ị leba anya n’ihe odide ndị o dere, Anyị nwere ike ime ka Luna de lobos pụta ìhè, nke bụ akwụkwọ akụkọ nke ya n'ezie. Ngbanwe ahụ bụ ọrụ ya na edemede ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, n'ime afọ ndị gafeworonụ, o nweela ohere iji gosipụta ikike ya dị ka onye na-ese ihe nkiri na ọtụtụ fim.
Anyị na-ahapụ ha n'okpuru.
Eserese nke ụlọ ịsa ahụ (1984).
Wolf Moon (1987).
Isi mmalite nke afọ (1991).
Elu nke ụwa (1995).
Okooko osisi si n'ụwa ọzọ (1999).
Na otuto nke anya (2009).
Ị gụọla akwụkwọ Julio Llamazares ọ bụla? Kedu ihe ị chere? Gwa anyị echiche gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Julio Llamazares: akwụkwọ ndị o dere
Mgbụsị akwụkwọ. Nhọrọ nke poems raara nye. Ndị edemede dị iche iche